CHRYSANTHEMUM EE DHERIGA AYAA UBAXU, WAXA LAGA SAMEEYO KIISKAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Maxaa la sameeyaa haddii qolka chrysanthemum uu hoos u dhacay, sida loo soo saaro geedka dib u soo celinta nolosha
Xilliga dayrta, dukaamada ubaxa waxay ka buuxsanyihiin dheriyo leh digaag cagaaran oo dabacsan. Waxaa loo iibsadaa si ay u bogsadaan midabada caleenta ee ubaxyada oo ay ka neefsadaan xayawaankooda jilicsan.
Markaas, marka dufanka kiriimka ah ee uu dillaacsan yahay, waa la tuurayaa. Oo waa wax aan waxba tarayn. Waxaad ku neefsan kartaa nolol cusub.
Ma u baahanahay inaan iska tuuro bam gacmeed ka dib markii ubax
Chrysanthemums yaryar ee dheriga potted yihiin yihiin si gooni ah koray, sidaas darteed waxay u baahan yihiin laba jeer xajinta daryeelka marka loo eego dhirta dibadda. Dad badan ayaa go'aansada inaanay garabgalin dadaaladaas garbahooda waxayna si fudud u tuuraan baadiyaha yaraaday. Laakiin waxaa jira beeraha ubaxa qaarkood oo aan si fudud u ogeyn in la samayn karo mar kale.
Ma taqaanaa? Wixii xaaladaha qolka beeray noocyo of chrysanthemum iyo soodhaha Shiidaalka. Kareemahani waxay u koraan ugu badnaan 70 cm oo dherer ah. Ubaxoodu waxay noqon karaan kuwo waaweyn, ilaa 5 cm dhexroor, ama halkii yar - ilaa 2.5 cm. Madaxa baadiyaha waxaa sidoo kale loo qaabeeyay si ka duwan. Sidaa darteed, noocyo kala duwan waxaa lagu diyaarin karaa qaabka dhaadheer, muuqaal guud ama korriin baadiyaha.
Si kastaba ha ahaatee, si ay u sababeeyaan dib-u-ubaxaan ee Chrysanthemum, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo habka ku habboon qoyaanka, iftiinka, heerkulka. Dareemka ugu yar yar - iyo dhirta ayaa lumisa saamaynteeda qurxinta, waxay u beddeleysaa baadho aan daal iyo dareen lahayn, ama u dhintaan oo dhan.
Laakiin leh daryeel wanaagsan ayaa jecel ubaxyo cusub in ka badan hal mar. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo abuuri karo baadiyaha.
Beerta beertu waa dhul furan dib-u-ubax
Habka ugu fudud ee dib loo dhisi karo dhirta ayaa ah in marka qolka chrysanthemum uu ubaxsan yahay, ku beeraan dhul furan guga marka cimiladu diiranto.
Dhammaan xagaaga, waxay soo ururin doonaan faa'iido iyo nafaqo ka timaadda carrada, waxay noqotaa duufaan hawo nadiif ah iyo in lagu diiriyo qorraxda qoraxda. Xilliga dayrta, waxaad mar kale ku dhejisaa dheri, waqti ka dib, ku raaxee ubax soo socda.
By habka, waxaa jira noocyo of chrysanthemums in ka badbaadi karaa jiilaalka iyada oo aan cillado fawdo ah. Si kastaba ha noqotee, qofna ma bixin karo dammaanad ah in baadiyaha aan ku dhiman doono xilliga qaboobaha. Laakiin jiilaalka waa in si taxadar leh loo diyaariyaa.
Hore ku beeray dhulka beerta. Sida ugu dhakhsaha badan ee dhaxan ugu horeysay yimaadaan, gooyaa afkoda 10 cm dhererka iyo gebi ahaanba xiro baadiyaha leh caleemo qalalan, peat ama dhulka. Laga soo bilaabo korka buurta la sameeyay waa in lagu xiro hoy gaar ah, tusaale ahaan, filim.
Maskaxda ku hay in xataa xitaa taxaddarradaas oo dhan, ma jirto wax ballan-qaad ah in rugta ay dhaafi doonto. Oo marka jiilaalka ka dib, ma aha in la gooyaa dayrta xigta, mararka qaarkood waxay dhacdaa sanad.
Ma taqaanaa? Dalka Japan, chrysanthemum waa calaamad muujinaysa muddo dheer iyo farxad. Sannad kasta waxaa jira dabbaaldeg ah oo ay ku jirto bamamnimada "actor". Waxay qurxisaa carrabyada, cabitaanka daroogada iyada oo tufaaxa, khamriga ku dhex wareegaya goobo oo doonaya qof kasta oo ka qaybgalaya nolol farxad iyo nolol dheer.
Gooyo iyo ilaalinta bamam-caleen ka dib ubax
Waxaa jira hab kale oo lagu badbaadiyo geed kadib markii bamam ah oo dhoobo ah uu dhalaalay. Ka tagaya dheriga, waa la gooynayaa, haynta caleemaha yar yar oo aan ka badnayn 10 cm oo dherer ah. Ka dibna dheriga gogolka ku rid qolka a heerkulka hawadu uusan ka badnayn 8 ° C.
Tani waxay noqon kartaa loggia, balcony glazed, laakiin ma maqaasi, tan iyo xataa xaddiga badan ee iftiinka waa lagama maarmaanka u ah dhirta xitaa inta lagu jiro jiilaalka. Geedka waxaa lagu hayaa dhammaan jiilaalka.
Waa in lagu waraabiyo oo kaliya qalajinta xoog leh, marka ciidda ku dul qallajiyo laba mataan. Tani waxay dhacdaa ugu badnaan hal mar bishii.
Guga ee chrysanthemum transplanted galay dhulka cusub. Waa in ay leedahay heer aad u hooseeya oo ah acidity, si fiican u bacrimiya iyo dabacsan.
Wixii baadiyaha si ay u koraan si siman, cufan, weyn, waa in si taxadar leh oo sax ah jiido.
Nidaamka waxaa la fuliyaa saddex jeer. Marka ugu horeysa ee isla markiiba ka dib markii la beero, ka dibna - markii caleemaha gaareen 8 cm oo dherer ah, iyo saddexaad sida loo baahan yahay, haddii khariidad hore ma uusan caawin in la sameeyo kubad qurux badan.
Isla markiiba tuujinta waxaa la sameeyaa wax ka badan hal mar tobankii maalmoodba mar. Nipka badan, cufnaanta baadiyaha iyo ubax qaro weyn, laakiin in ka badan saddex wax macno lahayn. Qaybo culus ee chrysanthemums potted heerarka hiddaha.
Mar kasta ma suura galin karto in dheriga qolka qaboojiyaha loo dhigo, waxaana la joogaa xilliga jiilaalka daaqadaha daaqadaha - ugu qabow, laakiin sidoo kale ugu fudud ee guriga. Hase yeeshee, xaaladdan, xoqidda ayaa wax yar ka duwan. Caleemaha qallalan iyo caleemaha ayaa la soo saaraa, burooyinkeeda oo u duulay, iyo laamihii noolaa ayaa la jarjaray. Ku waraabinta kiiskan, ku qaadashada sidii caadiga ahayd.
Qaar ka mid ah beeraleyda ubaxa ah ayaa weli halis ku jira, marka, marka ay bamamku ku boodaan, u dir dhirta jiilaalka ilaa hoose. Xaaladdan oo kale, manjooyin waxaa loo fuliyaa sida jiilaalka balakoonka. Laakiin waraabinta waxaa loo sameeyaa marar badan waxaana la geeyaa dhulka hoostiisa. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhulka uu ahaa mid qoyan, laakiin maaha in la oggolaado qoyaan badan.
Chrysanthemum waxay toosisaa hareeraha bartamaha guga. Tan waa la ogaan karaa caleemaha cusub. Muddadan, waxaa haboon in la qaato dheriga hawo cusub ama dib ugu noqda daaqada daaqada ee qolka.
Sida loo sameeyo ubaxyada kryantamemum, hilibka yar yar
Sidaa darteed, bustahaaga ayaa yaraaday, waxaad samaysay wax walba si aad u sii dheeraato ubaxa, laakiin tani ma dhicin - maxaad samaynaysaa? Marka hore, hubi haddii ay leedahay iftiin ku filan oo ah habka heerkulka lagu hayo?
Chrysanthemum koraan iyo ubax kaliya haddii qolka uusan ka yar yahay 18 ° C. Si kastaba ha noqotee, kuleyl xoog leh, ubaxu wuu dhiman karaa.
Waqtigaan, waa lagama maarmaan in lala socdo waraabka. Cunto badan oo la qalajiyey ayaa sidoo kale burburinaya bamamiska. Si joogto ah u nadiifi. Dhirta kobcaya waxay u baahan yihiin quudinta oo keliya xilliga ubaxyada. Laakiin buufin wuxuu u baahan yahay laba jeer maalintii, subaxda iyo fiidka, gaar ahaan xagaaga.
By dayrta ee Chrysanthemum waa in daruuri Bloom. Haddii aysan taasi dhacin, fiiri sababaha daryeel xumo. Dhibaatada ugu caansan waa la'aanta dhar dalag sabool ah. Markaas waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso leh potassium iyo fosfooraska. Qalad kale oo caan ah ayaa ah qanjirro goor dambe ah. Laakiin haddii ay dhacdo, lama adkeyn karin.
Sidoo kale, dhibaatadu waxay noqon kartaa habka khaldan ee khaldan. Tani waxay noqon kartaa meel aad u madow meeshii xooga yaraanta iftiinka iftiinka iyo iftiinka qoraxda uu socdo wax ka yar todoba saacadood.
Xaaladdan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo iftiinka macmalka leh nalalka dhaadheer. Dhibaatadu waxay noqon kartaa mid aad u dheer oo qorrax leh. Haddii uu soconayo wax ka badan 10 saacadood, dhirta ayaa sidoo kale dareemeysa caafimaad daro.
Waa muhiim! Iyadoo gacan ka geysashada xasilinta, waxaad abuuri kartaa dareen ah in xilliga dayrta ee ku dhowaad ee bamam ah. Maanta waxay iftiin u tahay inay ku kooban tahay 7-8 saacadood. Laakiin iska ilaali warshadda. Haddii iftiinku aanu ku filnayn iyada, way dhiman doontaa.
Tan iyo bamamthemum leeyahay nidaam xidid ballaaran, waa in lagu beeray dherooyin ballaaran leh dheecaan wanaagsan. Tani waxay gacan ka
Dheriga isku mid ah wuxuu kobcin karaa dhowr duurka, xitaa noocyo kala duwan, laakiin waa muhiim in xididadoodu leeyihiin meel ku filan. Haddii kale, midabada aad adigu ma sugi kartid.
Sida aad u arki karto, haddii aad abuurto qolof brotomanthemum ah oo ku haboon, waxaa laga yaabaa inay ku farxi karto ubax in ka badan hal sano. Cuncun, ubax daboolan, oo ka soo baxaya caraf udgoon oo qadhaadh ah, waxay abuuri doontaa niyadda deyrka kulul ee gurigaaga. Waxa kaliya oo muhiim ah in aan loo oggolaan ciidda inay qalajiso oo ay ilaaliso nidaamka iftiinka. Haddii la doonayo, qolka chrysanthemum waxaa lagu beeray beerta, beerta hore ama sariirta ubaxa. Raadinta dhammaan xeerarka jiilaalka, sanadka soo socda waxaad heli doontaa baadho ubax leh oo qurux badan oo qurxin doona goobtaada.